စတီးဗန် တိုင်လာ - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၈ မတ်လတွင် တွေ့မြင်ရသော တိုင်လာ
စတီးဗန် ဗစ်တာ တော်လာရီကို
(1948-03-26) မတ် ၂၆၊ ၁၉၄၈ (အသက် ၇၄)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်မြို့၊ မန်ဟတ်တန်အပိုင်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဟာဝိုင်ယီကျွန်းစု၊ မောင်းရစ်ကျွန်း
၁၉၇၀ – လက်ရှိ
Cyrinda Foxe (m. 1978; div. 1987)
Teresa Barrick (m. 1988; div. 2006)
Vocals, guitars, keyboards, harmonica, drums
စတီးဗန် တိုင်လာ (အင်္ဂလိပ်: Steven Tyler) (မွေးဖွား : ၁၉၄၈-မတ်-၂၆) သည် အမေရိကန် အဆိုတော်၊ တေးရေးသူ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ယခင် ရုပ်မြင်သံကြားထင်ကရပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဘော့စတန်အခြေပြု ရော့ခ်ဂီတဝိုင်း အဲရိုစမစ် ၏ ခေါင်းဆောင်အဆိုတော်အဖြစ် လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုအဖွဲ့တွင် ဘာဂျာတူရိယာ၊ စန္ဒယား၊ ပါကားရှင်း တို့ကိုလည်း တီးခတ်/တီးမှုတ် သည်။ အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ဟစ်အော်ခြင်း နတ်ဆိုး (Demon of Screamin)  အမည်ကို ၎င်း၏ အသံအမြင့်ဖြင့် အော်ခြင်း၊ သီဆိုနိုင်သော သံစဉ်နယ်ပယ်ကျယ်ပြောခြင်းတို့ကြောင့် ရရှိလာခဲ့သည်။ စင်မြင့်ထက်၌လည်း ထူးချွန်ကျွမ်းကျင်စွာသီဆိုနိုင်သဖြင့် လူသိများသည်။ ၎င်း၏ စွမ်းအားအပြည့် ဖျော်ဖြေပွဲများတွင် အရောင်အသွေးစုံသော တောက်တောက်ပြောင်ပြောင် ဝတ်စုံများ၊ ၎င်း၏ အမှတ်အသားဖြစ်သော လည်စည်းပဝါကို မိုက်ခရိုဖုန်းတိုင်တွင် တွဲလောင်းချိတ်ဆွဲ၍ စတိုင်ထုတ်လေ့ရှိသည်။
၁၉၇၀နှစ်များတွင် တိုင်လာသည် အဲရိုစမစ်၏ ဦးဆောင်အဆိုတော်အဖြစ် ထင်ရှားလာ၏။ ထို ဟာ့ဒ်ရော့ခ်ဂီတဝိုင်းသည် မှတ်ကျောက်တင်ခံရသော Toys in the Attic ၊ Rocks အခွေများ၊ တစ်ပုဒ်ချင်းနာမည်ကျော်သီချင်းများဖြစ်သော Dream On ၊ Sweet Emotion ၊ Walk This Way စသည်တို့ကိုလည်း ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၁၉၇၀-၈၀နှောင်းပိုင်းများ၌ တိုင်လာသည် ဆေးနှင့် အရက်များအလွန်အကျွံသုံးစွဲခဲ့သဖြင့် အဖွဲ့နာမည် မှေးမှိန်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၆၌ မူးယစ်ဆေးနှင့်ပတ်၍ ပုံမှန်ဖြစ်စေရန်ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်လေ့ကျင့်ရေးများပြီးဆုံးခဲ့ကာ အဲရိုစမစ်အဖွဲ့ပြန်လည် ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ တိုင်လာနှင့် ဂျိုးပယ်ရီတို့ Run-DMC သို့ပူးပေါင်း၍ အဲရိုစမစ်၏ နာမည်ကျော်သီချင်း "Walk This Way" သီချင်းကို ပြန်လည် ဆန်းသစ်သီဆိုခဲ့ကြပြီး ထိပ်တန်းသီချင်းအဆင့် (၅) ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဲရိုစမစ်အဖွဲ့သည် တကျော့ပြန်လာခြင်းအဖြစ် ပလက်တီနမ်အဆင့်ရ အခွေများ Permanent Vacation ၊ Pump ၊ GetaGrip ၊ Nine Lives စသည်တို့ကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ထိုအခွေမှသီချင်းများသည် အဖွဲ့ကို ဆုများစွာရရှိခဲ့စေသည်။ ထိုစဉ်ကာလများအတွင်း တိုင်လာသည် အဖွဲ့၏ အရှည်ကြာဆုံး၊ အကျယ်ပြန့်ဆုံးသော ဂီတခရီးစဉ်ပွဲများကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သီချင်းများကို ဂီတရုပ်သံများဖြင့် ရောင်းအားမြှင့်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများတွင်လည်း ဖျော်ဖြေပါဝင်ခဲ့သည်။
ဤအောင်မြင်မှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သောကြောင့် တိုင်လာသည် အကြာရှည်ဆုံးသောရော့ခ်ဂီတစံပြပုဂ္ဂိုလ်များအနက် တစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၈၀နှောင်းပိုင်းမှစ၍ တစ်ကိုယ်တော်ကြိုးစားလှုပ်ရှားမှုများလည်း စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့၍ အခြားအနုပညာရှင်များ၏ ဂီတနယ်ပယ်တွင်လည်း ဧည့်သည်ပုံစံအဖြစ် ပါဝင်လာတတ်သည်။ ဧည့်သည်ပုံစံအဖြစ် တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အနုပညာရှင်များမှာ Alice Cooper ၊ Mötley Crüe ၊ Santana ၊ Pink နှင့် Keith Anderson တို့ဖြစ်၍ ရုပ်ရှင် နှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ကဏ္ဍများ ( အမေရိကန်အိုင်ဒေါ (အိုင်းဒါလ်) တွင် ဒိုင်တစ်ဦး) တွင်လည်းပါဝင် တင်ဆက်ခဲ့သည်။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးသားခြင်း၊ ၂၀၁၁၌ တစ်ကိုယ်တော်လက်ရာ (It) Feels So Good သည် ထိပ်တန်းသီချင်း(၄၀)တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ပွဲတစ်ခု စင်မြင့်ထက်မှ ပြုတ်ကျပြီး ၂၀၀၉-၁၀တွင် အဲရိုစမစ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကတောက်ကဆများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ယင်းကာလများ၌ ဆေးသုံးဆွဲခြင်းများရှိခဲ့၏။ ၂၀၀၉တွင် ထိုအတွက် ကုသမှုခံခဲ့သည်။ American Idol နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကာ ၎င်း၏တီးဝိုင်းဖော်များကို ပြောပြခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ၂၀၁၆၌ တိုင်လာသည် ၎င်း၏ ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော်အခွေ We're All Somebody from Somewhere ကိုဖြန့်ချိ၍ ထိုအခွေမှာ ကန်းထရီးရော့ခ်ဂီတပုံစံဖြစ်ကာ နာမည်ကြီးသီချင်း Love Is Your Name ပါဝင်ခဲ့သည်။
ရိုးလင်းစတုန်း မဂ္ဂဇင်း၏ အကြီးကျယ်ဆုံးသော အဆိုတော် (၁၀၀)တွင် တိုင်လာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ဂီတမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖြစ်သော Hit Parader ၏ သမိုင်း၌ ထိပ်တန်း မက်တယ်လ်ဆိုတော် (၁၀၀)တွင် အဆင့် (၃)ဖြင့်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ တိုင်လာကို အဲရိုစမစ်အဖွဲ့နှင့် အတူ Rock and Roll Hall of Fame အဖြစ်ဂုဏ်ပြုချီးမြင့်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ တိုင်လာနှင့် တေးရေးအဖော် ဂျိုးပယ်ရီတို့က အမေရိကန်တေးရေးသူများ၊ စာရေးဆရာများ၊ ထုတ်ဝေသူများဆု (ASCAP)ကို လက်ခံရရှိကာ Songwriters Hall of Fame အဖြစ် ဂုဏ်ပြခြင်းလည်း ခံရသည်။
↑ "Critics Rip Steven Tyler Over National Anthem Rendition"၊ Time၊ January 23, 2012။ Archived from the original on October 19, 2015။
↑ Kate the Stanhope။ "Steven Tyler Checks Into Rehab for Painkiller Addiction"၊ TVGuide.com။ Archived from the original on April 9, 2010။
↑ 100 Greatest Singers of All Time။ Rolling Stone။ April 29, 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ April 21, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Steven Tyler, Joe Perry, Diplo and Other Top Names in Music Honored at 30th Annual ASCAP Pop Music Awards။ ASCAP (April 17, 2013)။ August 26, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 30, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Aerosmith duo Steven Tyler and Joe Perry join Hall of Fame"၊ BBC News၊ June 14, 2013။ July 30, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on June 18, 2013။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စတီးဗန်_တိုင်လာ&oldid=725147" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။